> Resource > Lugood > Sida loo Beddelaan Napster in Lugood
Napster waa barnaamij lacag la'aan ah oo horay u ah, laakiin hadda dukaanka music caan online for iibsigu heeso iyo files audio. Waxaad u malayn kartaa mid ah iyaga, waxayna jiidayeen in Lugood ilaalinta weligiis, ama iyaga loogu badalo in ay iPod, iPhone for loo maqli karo waqti kasta, meel kasta. Iyo qodobkan ku tusi doonaa sida loo Napster wareejiyo Lugood laba qaybood.
Qaybta 1aad: Sida loo badalo Napster in Lugood
Qalab dilaaga loo isticmaalaa in lagu badalo Napster in Lugood waa taariikhqorihii audio xoog badan - Streaming Audio Recorder . Napster in Lugood Converter waxaa loogu talagalay si ay u qoraan audio iyo ugu dambeyntii dhalin file MP3 song sida Napster ka ciyaara dhex kaarka codka your computer ee. Markaas waxaad ku wareejin karaa file MP3 in Lugood si toos ah in app this.
Talaabada 1: Download iyo rakibi this smart app. Haddii aadan weli ma haysan, waxa aad heli kartaa iyada oo xiriirka hoose.
Talaabada 2: waxaa Launch oo ku dhufatey "Record" button on dhinaca kore ee bidix. Markaas ciyaaro mid ka mid Napster song aad rabto in lagu wareejiyo. Bal eeg, tan smart app waxaa lagu qoro heesta. Marka song ay ka badan tahay, la duubay joojiyaan isla doonaa, badbaadinta file qaab MP3 oo aan wax khasaaro audio.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad ka heli file MP3 ah, kaliya waxa ay xaq u-riix maktabadda iyo dooro "Open gal".
Talaabada 3: bandhigaan track duubay maktabadda this app ee, ka dibna riix "Add to Lugood" badhanka hoose ee interface ugu weyn.
Waxaa la sameeyey! Your music Napster waa in playlist Lugood la odhan jiray "SAR". Waxaa la yaab leh, soo maaha? Waxaa mudan in lacagta. Waad og tahay, in aanad xejisan karin music qaar ka mid ah haddii aadan sii wadaan in ay bixiso marka Times u dhacayo. Sidaas, waxaa la odhan kara app this badbaadin karo lacag aad u badan oo aad u.
Qeybta 2: Napster Sida loo wareejiyo Lugood si toos ah
Qaybtan, waxaad baran doontaa sida loo si toos ah si deg deg ah u gudbiyaan kuwan raadkaygay dhexeeya Napster iyo Lugood.
1. Orod barnaamijka Napster iyo Lugood on desktop.
2. Xuquuqda-riix song aad rabto in lagu wareejiyo barnaamijka Napster oo guji "Hel" in la furo gal meesha song waxaa loo kaydiyaa.
3. Hit ah "Music" qasabadda ee menu bidix dhinac oo Lugood aad.
4. Si toos ah jiidi & hoos u heesta ka folder in Lugood "Music" Maktabadda.